तालिबानले सत्ता कब्जा गरिरहँदा किन मौन रह्यो अफगान सेना ? यस्तो छ भित्रि रहस्य — Imandarmedia.com
एजेन्सी। १५ अगस्टमा जब तालिबानी विद्रोही अफगानिस्तानको राजधानी काबुल छिर्न थाले, राष्ट्रपति असरफ घानीले देश नै छाडेर भागे । केही रिपोर्टका अनुसार उनी ताजिकिस्तान पुगे भनिएको छ । कसैले उज्वेकिस्तान पुगेको दावी गरेका छन् ।
सेनाले भनेको थियो कि, हाम्रो दुश्मनसँग हाम्रै पछाडि गएर वार्ता गरेर हस्ताक्षर गर्नसक्ने सरकार विदेशीका लागि काम गरेको छ ।
२०१५ मा फ्लोरका लागि अमेरिकी रक्ष विभागले ३ दशमलब ५ बिलियन डल खर्च गरेको थियो । तर योे सबै पैसा भने अक्सर करदाताकै पैसा हुन्छ । उक्त पैसा सेनालाई दिइन्छ । सेनाले भने ठूला कम्पनीलाई साथमा लिन्छ । जसबाट धेरै नाफा कमाउन सकिन्छ ।
यसका लागि सेनाले राजनीतिज्ञलाई समेत प्रभावमा पार्ने गर्छ । फ्लोरले समेत यहाँ ठूलो रकम खर्च गरेर नाफा कमायो ।
यो २० वर्ष लामो संघर्षमा यति धेरै तनाबका बावजुद कसलाई फाइदा पुग्यो त ? यसबीचमा को चाहिँ सफल भयो त ? अमेरिकाले आफ्नो मिसम पूरा भयो भने पनि, तालिबानले विजयोत्सव मनाए पनि आखिर युद्धको नाममा ज्यान गुमाउने लाखौँ नागरिक तथा सैनिक जवानहरु । खर्बौँ रकम कर संकलन गरी पठाउने अमेरिकी नागरिकहरु । अफगान नागरिकहरु यथार्थमा पीडित हुन् । न्यूयोर्क टाइम्समा एक पाठकले लेखेका थिए यो लामो युद्धमा यदी कसैलाई फाइदा भयो भने, अमेरिकी मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्सलाई मात्रै फाइदा भयो । अरु सबैलाई घाटा ।